तपाईलाई थाहा छ ड्रग्स र सेक्सको लत कुन बढी खतरनाक ? | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ ड्रग्स र सेक्सको लत कुन बढी खतरनाक ?
कतिपय अवस्थामा बलात्कार जस्ता घटनाका अपराधीलाई सेक्सको लत वा मानसिक रुपमा असामान्य रहेको कुरा गर्ने गरिन्छ । मदिरा, चुरोट वा अन्य ड्रग्सको लतजस्तै सेक्सको पनि लत हुने गर्दछ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार संसारका हरेक २५औं व्यक्ति सेक्स एडिक्ट हुने गर्दछ । सेक्स एडिक्टलाई एउटा मनोवैज्ञानिक रोग मान्ने गरिन्छ । जसमा रोगी हरेक समय सेक्ससँग सम्बन्धित कुरा सोचिरहन्छ । ब्रिटेनको क्याब्रिज युनिभर्सिटीका अध्ययनकर्ताहरुले यो लतमा फसेका व्यक्तिहरुको निजी जीवन निकै नराम्रोसँग प्रभावित हुने बताएका छन् ।
उनीहरुले विशेषगरी पोर्नोग्राफीले मानिसमा पार्ने असरमा बारेमा अधययन गरेका हुन् । प्लोस वन पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार यस्ता व्यक्ति हरेक समय लज्जा महशुस गर्ने गर्दछ र यस्ता मानिसहरु कसैसँग सिधा आँखा जुधाउँन सक्दैनन् । तर, पोर्न हेर्दैमा यस्तो लत लाग्ने भन्ने नहुन पनि सक्छ ।
सेक्सको लतमा पोर्नोग्राफीको असर दिमागमा त्यसरी नै पर्दछ । जस्तो ड्रग्सको । उनीहरुलाई सेक्ससँग सम्बन्धित कुरा सोचिरहने लत हुन्छ । उनीहरु यसप्रकारको सोच वा भावनाहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न असमर्थ हुन्छन् । यसप्रकारका मानिसलाई पोर्न फिल्म हेर्ने चाहना त्यत्तिकै हुन्छ जस्तो नशा लिनेहरुलाई नशाको लत हुन्छ ।
यो अध्ययनमा सेक्सको लत लागेका १९ जना पुरुष विरामी सहभागी गराइएको थियो । साथै त्यति नै संख्यामा आम मानिसलाई पनि अध्ययनका लागि राखिएको थियो । अध्ययनमा सेक्स लत लागेकाहरुले पोर्न फिल्म सानै उमेरदेखि हेर्न थालेको पाइएको थियो ।
क्याब्रिज युनिभर्सिटीका मनोचिकित्सा विभागका डाक्टर भैलेरी भुनले अध्ययनको अध्यक्षता गरेका हुन् । उनी भन्छिन्–हाम्रो अध्ययनमा जसलाई सहभागी गराइयो, उनीहरुलाई सबैलाई आफ्नो सेक्स व्यवहार नियन्त्रणमा राख्न समस्या भइरहेको थियो । र, यसबाट उनीहरुलाई निकै ठुलो हानीको सामना गर्नु परेको थियो । उनीहरुको सम्बन्ध र जीवनमा यसको असर परिरहेको थियो ।
उनका अनुसार यौन लत लागेकाहरु अनेकन व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका थिए । उनले भनिन्–हामी हेर्न चाहन्थ्यौ कि के उनीहरुको दिमागमा पनि यसप्रकारको समानता देखिँदैछ ? उनीहरुलाई ससाना भिडियो देखाइयो, जसमध्ये केही खेल र केही सेक्सका थिए । एमआरआईबाट उनीहरुको दिमागको गतिविधि जाँच गरियो ।
अध्ययनकर्ताहरुले उनीहरुको दिमागको तीन स्थानमा अन्य सामान्य मानिसको तुलनामा बढी सक्रियता पाए । उनका अनुसार यो त्यही स्थान थियो जुन ड्रग्सको लत लागेकाहरुको दिमागमा यस्तो अवस्था बढी सक्रिय हुने गर्दछ । सेक्स भिडियो देखाउँदा सेक्सको लत लागेकाहरुमा उत्तेजना र सेक्स गर्ने इच्छा त बढ्यो । तर, उनीहरुलाई भिडियो मन परेर यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भने होइन । भिडियो मन नपरे पनि उनीहरु उत्तेजित भए ।
यद्यपि अध्ययनकर्ताहरुले कुनै ठोस परिणाम आउनुअघि थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यसपछि मात्रै ड्रग्स र सेक्सको लतबीच कति गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा भन्न सकिनेछ । एजेन्सी
Previous post: महाकालीमा हाम फालेकी महिलाको मृत्यु
Next post: बेश्यावृत्ति पेसा एक, कानुन अनेक, कहाँ कस्तो कानुन छ यौनकर्म रोक्न ?